Komorebi: ကျွန်ုပ်တို့၏စားပွဲခုံများကိုကာတွန်းနောက်ခံဖြင့်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
ငါတို့နှင့်အတူဆက်လက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးများယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုထားသောဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖော်ထုတ်ပေးလိမ့်မည် ကိုမိုရီဘီ.
ဟုတ်တယ် ကိုမိုရီဘီ လှပပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် နောက်ခံမန်နေဂျာ (နောက်ခံပုံများ) အဘို့အ fixed နှင့်ကာတွန်း Linux ကိုနှင့်တူသော ကွန်ကရစ်, ငါတို့မှအထူးထိတွေ့ပေးခွင့်ပြုထားသည် စားပွဲခုံများကျွန်တော်တို့ရဲ့၌သူတို့ကိုပြသရန် မျက်နှာပြင်ရိုက်ချက်များ ငါတို့ကျင်းပသောနေ့ရက်များ #DesktopDay.
ကျနော်တို့ကဘာလဲဆိုတာရှင်းပြရန်ဝေးလွန်းသွားပါလိမ့်မယ် ကိုမိုရီဘီလွန်ခဲ့သော (၃) နှစ်ခန့်ကစတင်ခဲ့သည့် beta အဆင့်တွင်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကြောင်းကိုးကား ယခင်ဆက်စပ် postကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်
"Komorebi သည် Linux distro များအတွက်လှပပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းသော wallpaper manager ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် open source ဖြစ်ပြီး Vala တွင် Abraham Masri မှတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီ tool တွင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောနောက်ခံများရှိပြီးနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အချိန်မရွေး၎င်းတွင်ဖန်သားပြင်နောက်ခံ (animated၊ static, gradient, အစရှိသဖြင့်) များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြွယ်ဝစေသည်။" Komorebi: လှပပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့နောက်ခံမန်နေဂျာ
ဒီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုမှာပိုပြီးအာရုံစိုက်သွားမှာပါ သင့်ရဲ့လက်ရှိ version ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ.
1 XFCE အပေါ် Komorebi
1.1 Komorebi + Windows Header + AppMenu Module ကိုအသုံးပြုခြင်း
XFCE အပေါ် Komorebi
Komorebi + Windows Header + AppMenu Module ကိုအသုံးပြုခြင်း
လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သက်ဝင်ကာတွန်း Desktop ကိုမည်သို့ရယူမည်ကိုရှင်းပြရန်ဥပမာ၊ ပုံအထက်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်aကိုသုံးမည် GNU / Linux Distro ခေါ်ဆိုခ MX Linux ကို 19.3အမည်ရှိအထူးပုဂ္ဂိုလ်ရေး Respin အံ့ဖွယ်အမှုများ.
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက install လုပ်လိုက်တာပဲ ကိုမိုရီဘီသင့်ရဲ့ထံမှ download လုပ်ပါ GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ် ဦး အဘို့အညာဘက် installer ကို GNU / Linux Distro အပေါ်အခြေခံပြီးသောဤသင်ခန်းစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုတဲ့တစ်ခုအဖြစ် debian 10 နှင့်အသုံးပြုပါ Xfce။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုလည်းနှိပ်နိုင်သည်။ komorebi-2.1-64-bit.deb.
ပြီးတော့ငါတို့တစ်ခုချင်းစီအတွက်အဆင်ပြေဆုံးနည်းနဲ့ install လုပ်တယ်။ ငါတို့ကိစ္စမှာ၊ အောက်ပါ command command ကိုသုံးတယ်။
ထည့်သွင်းပြီးပါက၎င်းတွင်ရှာရန်အားဖြင့်၎င်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည် Applications ကိုမီနူး, အမျိုးအစား စံနစ်။ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့သူကပုံမှန်အားဖြင့်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည် Desktop Theme ပုံမှန် (Desktop Wallpaper) ။ ရန် ဖွဲ့စည်းမှုမီနူး ၎င်းကို Desktop ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းနှင့်၏ထို option အတွက် «နောက်ခံပုံပြောင်းပါ» (နောက်ခံပုံပြောင်းပါ) ငါတို့လိုချင်တာကိုရွေးနိုင်တယ်။
အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုပါကလက်ရှိဖိုင်တွဲကိုသာလမ်းကြောင်းမှကူးယူရမည် «/System/Resources/Komorebi/» ၎င်းကိုအမည်ပြောင်းပါ။ ထို့နောက်ဖိုင်များကိုအစားထိုးလိုက်ပါ «video.mp4» y «wallpaper.jpg»အတူတူအမည်များကိုစောင့်ရှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ preference ကိုသူတို့က။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရွေးနိုင်သည် ဖွဲ့စည်းမှုမီနူးဖွင့်ပြီး၊ ဤအရာအလုံးစုံ, ချက်ချင်းအောက်ပိုင်းပုံရိပ်တွေမှာတွေ့မြင်အဖြစ်။
မှတ်ချက်ဖြေ - ဗွီဒီယို (ကာတွန်းနောက်ခံ) ကိုဝဘ်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတယ် DesktopHut.
a ကို configure ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီနူး သင့်ရဲ့လျှောက်လွှာများအတွက် XFCE မှ Mac OS စတိုင်လ်ရုံထည့်ပါ အပိုထိပ် panel (Panel 2)အောက်ပါ element များကိုထည့်ပါ။ «Windows Header - Buttons» y «Módulo AppMenu»။ အောက်ပါပုံများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း -
ပြီးတာနဲ့ဤအရာအလုံးစုံခြေလှမ်းများသက်ဆိုင်ရာအပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည် GNU / Linux Distro နှင့် Xfce နှင့်အသုံးပြု ကိုမိုရီဘီ y AppMenuမည်သူမဆိုသူတို့နှစ်သက်သောအုပ်စု (သို့) ရပ်ကွက်တွင်ထိုနေ့အတိတွင်ပြသရန်တောက်ပသောစားပွဲအသစ်ရှိလိမ့်မည် «DiaDeEscritorio».
သင်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုချင်လျှင် ကွန်ကရစ် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်စာမူကိုဖတ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည် မင်္ဂလာပါ:
Conkys: Neofetch ကိုမသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Conkys ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Komorebi», လှပသောနှင့်စိတ်ကြိုက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်သောကြောင်းအလွ application ကို fixed နှင့်ကာတွန်းနောက်ခံပုံ၏မန်နေဂျာ Linux အတွက်နှင့် Conky ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးထိတွေ့မှုကိုခွင့်ပြုသည် စားပွဲခုံများကျွန်တော်တို့ရဲ့၌သူတို့ကိုပြသရန် မျက်နှာပြင်ရိုက်ချက်များ ငါတို့ကျင်းပသောနေ့ရက်များ «DiaDeEscritorio»; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Komorebi: ကျွန်ုပ်တို့၏စားပွဲခုံများကိုကာတွန်းနောက်ခံဖြင့်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။
Cygnus-X1 သည်အိမ်သုံးဒုံးပျံထိန်းချုပ်ရေးအတွက် open source ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်သည်
FFmpeg - ခင်ဗျားမကြာသေးမီကနှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း Linux ကိုကျင်းပရန်အကျဉ်းချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း